Woopra bụ usoro nyocha nke na-elekwasị anya na atụmanya gị na ndị ahịa gị, ọ bụghị nyocha peeji. Ọ bụ ikpo okwu nyocha a na-ahazi nke ọma nke na-elekwasị anya na mmekọrịta ndị ahịa na saịtị gị - ọ bụghị naanị ụzọ ha na-aga. Nghọta a nyere nwere ike inye gị ohere iji ezigbo oge data rụọ ọrụ oge. Fọdụ n'ime atụmatụ ikpo okwu pụrụ iche nke Woopra: Nkọwapụta Ndị Ahịa - Chọpụta ndị ahịa gị site na email ma tinye aha ha na profaịlụ ha. Jikọta data ndị ahịa ozugbo